Dhumaatiin Calanqoo Lammaffaa isa Dhumaa Tahuu Qaba! « QEERROO
Biyya keessatti Qeerroon Bilisummaa Oromoo wareega qaalii baasuudhaan uummata Oromoo walii galla sochoosee qabsoo bilisummaaf qopheessee jira. Kun ijifannaa isa dura ti. Dammaqinsi fi sochiin uummata humna ittisaa yoo hin qabanne, diinni meeshaa waraana guddaa qabuu akka barbaadee itti roorisuu fi gaga’ama guddaa irraan gahuu danda’a. Gagaga’ama argamuu irraa kan ka’e uummatni rifatee akka gara boodaa hin deebine tilmaamni jiraachuu qaba. Diinni meeshaa qaba. Nuyi immoo gamtaa qabna. Gamtaan keenyaa meeshaa diinaa gadi miti. Lakkobsi saba keenya kan humna tahu yoo gamtaan dhaabanne dha. Haalli kun sadarkaa nama bonsu irra gahee jira.Yoo Oromoon Amboo irratti wareegame Oromoo Balee jirutu dirmata. Yoo Oromoo Harare irratti dhumu Oromoo Walaga jirutu Dirmata . Yoo Oromoon Boranati gaaga’amu Oromoo Waloo jirutu dirmata. Galatoomaa Qeerroo kan uummata keenya wal hubachiftanii. Akka humna isaa illee hubatuu tokkummaan dhaabbate waan gootaniif. Haalla kana seenaa uummata Oromoo baroota dhiyyoo keessatti yaroo duraaf argaa jirra. Haalli kun diina uummata keenyaa illee kan roomisiisuu dha.
« QABSOON OROMOO “MAARSHII” GEEDDARUU QABAA !
Guyyaa har’aa FXG Oromiyaa bakkoota adda addaa keesstti gaggeefamaa oole. »